Elewana Afrika Ltd, operating as Elewana Collection, is a Tanzania-based company with offices in Arusha and Nairobi, Kenya. Currently with seven unique properties in some of the world’s most iconic locations in Tanzania, Zanzibar and Kenya, Elewana Collection is committed to providing the very best African safari and beach experiences on a continent that has long been regarded as the ultimate destination.
From the slopes of Mount Meru to the vast plains of the Serengeti, the Elewana Collection of camps, lodges and hotels deliver an unrivalled experience that result in lifelong memories and an everlasting love for Africa. The Elewana Collection delivers the ultimate luxury experience with dreamlike tree houses, a superlative manor house, luxurious tented camps and beachside boutique hotels for discerned travellers.
SkySafari by Elewana, an all-inclusive package solution, offers a unique and exclusive seven-night, eight-day circuit safari, travelling between four of Elewana Collection’s northern Tanzanian camps and lodges with an executive class private aircraft.
In 2008 Bangkok-based Minor Hotel Group (MHG) acquired a 50 percent stake in Elewana Afrika Ltd. MHG is a hotel owner, operator and investor with a portfolio of over 10,000 rooms across more than 85 hotels, resorts and serviced suites under the Anantara, Avani, Oaks, Elewana, Marriott, Four Seasons, St. Regis and Minor International brands.